Ao anatin'ny sary tsirairay noforonina dia tsy maintsy misy singa iray izay hamita ilay antoko. Tokony hanatona tsara ny lafiny iraisana izy ary hanamboatra izany. Ohatra, ny fisafidianana akanjo, singa iray manan-danja farany dia ny kiraro, izay manintona ny vehivavy rehetra. Ny safidy ratsy dia afaka manimba ny endriny manontolo. Aza avela hanaraka fitsipika tsotra vitsivitsy izany, ny fomba hampifangaroana akanjo sy kiraro, izay zarainay faly.
Kiraro eo ambanin'ny akanjo
Alohan'ny fividianana, ilaina aloha ny mamaritra hoe ahoana no hampiasana ny kiraro hofidiana amin'ny ho avy. Raha ny marina, vehivavy iray no tokony ho voalohany sy mahasoa indrindra. Raha mifidy kiraro amin'ny akanjonao isan'andro ianao, dia tokony hanome modely mora kokoa. Mety, ohatra, ny kapa na kapa amin'ny fehiloha ambany, nefa misy tetezana na tsato-kazo. Noho izany, amin'ny tongotra lava dia tsy ho reraka loatra ny tongotra.
Amin'ny andro manjavozavo sy manjelanjelatra, akanjo maingoka be dia be amin'ny kiraro eo amin'ny lampihazo, voaravaka voninkazo eo anoloana. Eny, raha misy daty nomanina, dia sarafan-manga mena midorehitra manana loko maitso marevaka dia safidy tsara. Azonao atao ny manamboatra kitapo manga miaraka amin'ny kitapo manga eo amin'ny lampihazo sy mavo mavo mangamanga.
Ao amin'ny garabola tsirairay ny tokony ho akanjo sy kiraro mainty, sambo, izay heverina ho manerantany sy azo ampiharina. Na izany aza, ny sary rehetra dia tsy tokony ho maingoka. Ny akanjo mainty dia mifangaro tanteraka amin'ny mena, beige, fotsy, manga sy manga.
Mandeha mankany amin'ny hetsika manetriketrika, afaka misafidy kiraro kiraro akanjo marevaka ianao, voaravaka amin'ny dantelina, akora sy akora hafa. Amin'ity tranga ity dia ho kiraro mety amin'ny kiraro avo izany. Azonao atao koa ny manandrana ny loko, fa tadidio fa raha ny akanjo sy ny kiraro dia samy hafa ny lokony, dia tokony hifanaraka amin'ny kiraro ny akanjo.
Sarin'ny sary amin'ny ririnina
Fotoam-pisakafoanana Winter - hevitra
Amin'ny inona no tokony hitafy kiraro mainty?
Ny tsara tarehy dia manomana foto-drafaka any an-trano
Rahoviana aho no hanapaka kisoa?
Sakafo avy amin'ny seleria
Fitafy amin'ny endriny "Matryoshka"
Lofts amin'ny sehatra
Blouses avy amin'ny chiffon
Toe-java-bozaka tsy mety ritra
Tolona ho an'ny alika
Toeram-pivoahana amin'ny takaitra misy solaitrabe
Fitomboana tsikelikely "Buton"